Umyalelo - ILizwi eliSiseko • Iincwadi, i-Audio, iMagazini kunye nokunye
Iincwadi, ii-Ebooks kunye neeAudio
Iincwadi zePercival ziyafumaneka ngohlobo lwe-elektroniki lwethu Iincwadana zamaphepha.
Thinking and Destiny ezinoqweqwe
Thinking and Destiny I-Audiobook (i-USB Flash Drayivu, ifomati ye-MP3)
Onke amalungu eThe Word Foundation, nokuba ungayikhetha kweliphi inqanaba lenkxaso, uya kwamkela ikota yethu iphephabhuku, uLizwi kunye nesaphulelo kuma-40% kwiincwadi zePercival. Ukuba unqwenela ukuba lilungu kwaye uthathe isaphulelo kwi-oda yakho, okanye ukuba sele ulilungu kwaye ufuna ukufaka isaphulelo, nceda Qhagamshelana nathi ukubeka i-odolo yakho ngetsheki, ngefowuni okanye ngefeksi.
Ubulungu beMatriki okanye Abafundi
Ngaphezu kweminyaka engama-70, iZiko iSiseko lizibophelele ekwenzeni imisebenzi kaHarold W. Percival ukuba ifumaneke kubo bonke abafuna iNyaniso. Umbulelo ongazenzisiyo uya kunceda ekufikeleleni nasekuxhaseni iindawo ezininzi zomsebenzi wethu, njengokugcina iincwadi zishicilelwa, ukupapasha nge-elektroniki, ukubhengeza, ukuhambisa iincwadi zasimahla kumabanjwa, iilayibrari nabantu abangakwaziyo ukuzihlawula.
Sixhase Ngezinye iindlela
Ndiyacela Qhagamshelana nathi malunga:
Ukwenza isipho semali sonyaka
Ukwenza izipho zesitokhwe okanye ezokhuseleko
Ilungiselela ukuphindaphindwa kweminikelo yenyanga
Ukukhumbula iSiseko seLizwi kwintando yakho